LG – Page2– AsiaApps
LG fan တွေအနေနဲ့ G7 (သို့) G7 ThinQ (Flagship နာမည်အတိအကျမထွက်သေး ?) ကို MWC 2018 မှာမျှော်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့် ထင်ထားသလိုတော့မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ MWC မှာလွဲခဲ့တဲ့ G7 ကို LG…
LG ရဲ့ G7 ဟာလာမယ့် ဧပြီလကုန် (သို့) မေလအစောပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိတော့မယ် သတင်းတွေကတော့ လွန်ခဲ့ရက်အနည်းငယ်ထဲကထွက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမှာ စတင်ဖြန့်ချီရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းကတော့ ကိုရီးယားငွေကြေး ဝမ် ၁ သိန်း (USD 900 ဝန်းကျင်) ရှိမှာဖြစ်မယ်လို့လဲ…
LG ဟာ K series ထဲက Mid-range စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ 2018 version K8 နဲ့ K10 တို့ကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ မှာကျင်းပမယ့် MWC 2018 မှာချပြသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။…
February 5, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on တရုတ်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်မှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ LG!
LG ဟာတရုတ်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်မှထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ကမှ တရုတ်စီးပွားရေးသတင်းငှာနကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LG အနေနဲ့အခုလိုရုတ်တရက် တရုတ်စမတ်ဖုန်းစျေးကွက်ကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတာကတော့ ဇန်နဝါရီလမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ LG ရဲ့ ၂၀၁၇ အတွက်ရောင်းအားရလဒ် ကြောင့်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ LG Electronics Inc, LG Home Appliance & Air…